ကံကောင်းခြင်း Archives - YOYARLAY Digital Media and News
သင်ဟာ ကံကောင်းတတ်သူလား? ကံဆိုးတတ်သူလား? ကံကောင်းခြင်း၊ ကံဆိုးခြင်း ဆိုတာတွေဟာ ထူးခြားဆန်းကြယ်မှုတွေ၊ ကြုံရာကျပန်း ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ တကယ်တမ်းတော့ အဲဒါတွေဟာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်၊ အပြုအမူတို့နဲ့ပဲ ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး စိတ်ပညာရှင်လည်းဖြစ် စာရေးဆရာလည်းဖြစ်တဲ့…
Published: March 20, 20188:18 am
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက စုန့်မင်းဆက်ခေတ်မှာ လယ်သမားတစ်ယောက်ဟာ ကံကောင်းခြင်းတွေ သူ့ဆီ ရောက်လာဖို့ အမြဲဆုတောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ သူလယ်ယာလုပ်နေတုန်း အနားမှာ ယုန်တစ်ကောင်က သစ်သားတိုင်တစ်ခုဆီ တည့်တည့်ပြေးဆောင့်မိပြီး သေသွားတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒီအခါမှာ သူက ယုန်သေကို ဝမ်းသာအားရ ကောက်ယူပြီး “တကယ်လို့သာ…
Published: February 23, 20186:46 am